मृत्यु पूर्वको अन्तिम यात्रा (कथा) - Nayabulanda.com
भीम राई ३० आश्विन २०७८, शनिबार ०९:५४ 156 पटक हेरिएको
मेरो घर छेउँमा सानो करेसाबारी थियो । बेलायती हिउँदले बिदा लिएपछि करेसाबारीका बिरुवाहरुमा स-साना पातका मुनाहरु पलाउन थालेका थिए । हिउँदमा पात झर्ने र बर्षामा पलाउने प्रकृतिको नियमलाई मानवले खास्सै टोडमोड गर्न सक्त्तै सक्त्तैनन् । त्यसबेला मार्च महिनाको समय थियो । मार्चको पारिलो घामसँग बरालिदै मेरा पाइतालाहरु एकदिन बानबुरी-अक्सफोर्ड नहरमा पुगेर ठोकिएका थिए । आइरिस सागर बाट उत्पन्न हुने चिसो बतास नहरसगँ लुकामारी खेल्दैखेल्दै अक्सफोर्डसायरसम्म आइपुग्दथ्यो । त्यसैले बिहानीको मौसम निक्कै चिसो हुन्थ्यो । तिनै चिसो मौसमको कुनै पर्वाह नगरी आँधाघण्टा जति हिडेर म बानबुरी रेल स्टेसनमा टुप्लुकै झुल्केको थिएँ ।
बानबुरी रेल स्टेसनमा पुग्दा जाडोले मेरो नाकबाट तपतप सिगाँन चुहिरहेको थियो । घाँटीमा झुण्डिरहेको गलबन्दीले सिगाँनलाई स्वाट्टै एकचोटी पुछे । र, सुस्तरी पर्खालको भित्तामा रहेको घडितर्फ दृष्टीगोचर गरें । भित्ते घडिले बिहानीको समय ९ बजाएको थियो । घडिदेखि नजर हटाए पश्चात् दुई चार कदम अगाडि बँढे र कसैलाई हेर्दै नहेरी खुरुखुरु स्टेसनको सिढी चढ्न थालें । त्यसरी सिढी चढ्ने क्रममा अनायसै मेरो मनमा रिचार्ड ट्रेभिथिकको बेस्सरी याद आयो । किनभने उनी तिनै महामानव हुन् । जस्ले करिव २ सय ५० बर्ष पहिले फलाम बोक्नको लागि पहिलो चोटी ‘लोकोमोटिभ’ इन्जिनको निर्माण गरेका थिए । त्यस्को बिकसित रुप नै आज बिश्वभरि पाइने आरामदायि रेलको मूख्य श्रोत हुन् भन्ने मनमनै सोचें ।
केहीबेरमा म रेल स्टेसनको माथिल्लो तलामा पुगेको थिएँ । माथि पुग्ने बितिक्कै मेरो नयनहरु स्टेसी डाल्टनको नयनहरुसँग मज्जाले साटिन पुगे । उनी लगभग साँढे पाँच फिट जति अग्ली थिइन । त्यँही माथि टलक्कै टल्कने चम्किलो मुहार, कैली केस, घुर्माइलो आखाँ, बुभुक्षित ओष्ठ र पातलो शरिरमा बेस्कन उँठेको एकजोडी आकर्षक छातीले मेरो मात्र होइन यस धर्तीमा भएका हरेक युवाहरुको ध्यान सजिलै खिच्न सक्दथिन् । उनी एल्सबरी भन्ने सानो अङ्ग्रेजी गाउँमा जन्मेर हुर्केकी थिइन । तैपनि रोजिरोटीको लागि हरेक दिन बानबुरी धाउने गर्दथिन् ।
उनको युनिफर्म पुरै निलो रङ्गको थियो र छातिदेखि सुरु भएर घुँडासम्म पुगेर सकिन्थ्यो । त्यति लोभलाग्दो शरिरकी धनि स्टेसीको मूख्य काम स्टेसनको गेटमा उँभिएर यात्रुहरुको टिकट जाँच गर्नु नै हो । तर, जतिबेला उनी टिकट जाच्नमा ब्यस्त हुँन्थिन, त्यतिबेला आफ्नो जीवन सङ्गिनीहरुसँग शारिरिक सम्पर्ग गर्न नपाएका पापी नयनहरु उनको जिउँडाल भरि नाँचीरहेका त्यसबेला दृश्य गर्न सकिन्थ्यो ।
समय समयमा सौचालयको प्रयोग र चिया छुट्टीको बेला उनले मानिसहरु छिर्ने गेटहरुलाई ह्वाङ्गै खुला छाडेर जान्थिन् नत्रभने बिहानको ६ बजेदेखि दिउँसोको २ बजेसम्म यात्रृहरुसँग गल्याङमल्याङ गर्न उनको दिनचर्या जस्तै थियो । हुनत रेल स्टेसनमा यात्राको लागि खरिद गरिएका टिकट छिराउने बितिक्कै आफै खोलिने केही स्वचालित गेटहरु पनि स्टेसनमा उपलब्ध थिए । तैपनि कतिपय समयमा स्वचालित गेटले झन्झट दिइरहने गर्थ्यो । त्यसैले यात्रृहरु मधुर मुस्कान सहित उनको सामु पुगि हाल्ने गर्दथे ।
हरेक बिहान नक्कली मुस्कान लिएर बाँच्न पर्ने स्टेसी उनको जिन्दगीसँग पटक्कै खुसी थिइनन् । तर, अफसोच बेलायती जीवन शैली अन्य अबिकसित राष्ट्रहरुको भन्दा बिलकुल फरक रहेका छन् । त्यसैले १८ बर्ष पार गरेका हरेक युवा युवतीहरु आफ्नो परिवारदेखि निस्केर घर बाहिर बस्ने गर्दछन् । त्यसरी आफुखुसी बस्नुपर्दा खान र लाउनको लागि सबैकुरो आफैले व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । तिनै बाध्यत्मक परिस्थितिले गर्दा उनको मुहारमा सदैव कालो बादल मडारी रहेको देखिन्छ । तिनै मलिन मुहारलाई मैले बिगत एकबर्षदेखि राम्ररी नियालि रहेको थिएँ । तर, त्यसदिन उनको कानको नजिकै पुगेर सुटुक्कै –
“स्टेसी ! ठिक्कै त छ नि, होइन ?” सानो स्वरमा भनें ।
“खै ! ठीक कि बेठीक भन्नु जेनतेन बाँचीरहेको छु,” छोटो उत्तर फर्काइन ।
उनको कुरो सुनेर मलाई दोश्रोचोटी बोल्न पटक्कै मन लागेर आएन । त्यसैले सरासर मेरा कदमहरु अगाडि बढाएँ । उनी सधै उँभिरहने गेटभन्दा करिव ५० मिटर जति टाढा तर ठीक बिपरित दिशामा मानिसहरु छिर्ने अन्य गेटहरु पनि रहेका छन् । गेटहरु त्यहाँ राख्नको मूख्य कारण कुनैकुनै यात्रृहरुले तलैतला भएको कारपार्कमा कारपार्क गरेर तिनै गेटहरुको प्रयोग गरेर स्टेसन भित्र छिर्ने गर्दछन् ।
गेटहरुको कुनामा एउटा सानो रेलको कार्यलय रहेको छ । र, कार्यलयदेखि एकजना एसियन मूलमा मानिसले हरेक बिहान टिकट बिक्रि गर्ने कार्य गर्दछन् । उनको बोलिको लवज, रुप र रङ्ग हेर्दा निश्चय पनि दक्षिणी भारत वा श्रीलङ्कादेखि आएको हुनुपर्छ भन्ने मैले ठम्याएको थिएँ । तर, हेर्दै सधै बेखुसी देखिने ती कर्मचारीसँग धेरै यात्रुहरु उनको नजिक जाने प्रयत्न गर्दैनथे । बरु उनको सामुन्ने रहेको स्वचालित भेन्डिङ् मेसिनदेखि खुन्द्रुङ्गै टिकट आफै झार्ने गर्दथे ।
स्टेसनको माथिलो तलामा केही समय नष्ट गरेपछि सुस्तरी कदम चाल्दै मुनि तलामा रहेको प्लेटफर्ममा झर्न सुरु गरेको थिएँ । बानबुरी स्टेसनको मुनि तलामा जम्मा ४ वटा प्लेटफर्महरु रहेका छन् । प्लेटफर्म २ देखि प्रायजसो रेलहरु बर्मिङ्घाम र म्यानचेष्टर सहरतर्फ जान्छन भने प्लेटफर्म ३ देखि बर्नमाउथ र लण्डनतर्फ जान्छन् । म्यानचेष्टर र बर्नमाउथ जोडने रेल वे कम्पनी चाहिँ क्रसकन्ट्रि रेल वे हो ।
तर, म चाँही बर्मिङ्घामदेखि लण्डन जाँदै गरेको रेललाई समात्न गइरहेको थिएँ । त्यसरी रेल लण्डन जाने क्रममा हाइवेकम सहरदेखि नजिकै रहेको एउटा रमाइलो डाँडा पार गर्नु पर्दछ । त्यो डाँडाको नाम ‘चिल्टर्न पर्वत’ हो र त्यसै डाँडाको सम्झनामा त्यस रेल वे कम्पनीको नाम चिल्टर्न भनेर स्थापना गरिएको छ । अहिलेसम्म ३२ वटा रेल स्टेसनहरु रहेको चिल्टर्न रेलले बेलायती ठूलो बाटो एम ४० को काखैकाख भएर सन् १९९६ देखि क्रमशः सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
त्यसबेला बिहानको समय ९ बजेर ३३ मिनेट गएको थियो । ठीक समयमा चिल्टर्नको एउटा रेलले मेरो सामुन्ने आएर हाजिर दियो । रेल रोकिने बितिक्कै म हतारहतार दोश्रो डिब्बामा चढिहालें । त्यसपछि दुई-चार कदम अगाडि बढे र झ्यालको छेउमा पुगे । अनि कसैलाई हेर्दै नहेरी बायाँ सिटमा थपक्कै बसें । रेलभित्रका यात्रृहरु यस्सै पातलो थिए । त्यसैले धेरैजसो सिटहरु खाली नै देखिन्थ्यो । म सिटमा बसेको मात्र के थिए । प्लेटफर्ममा उँभिरहेकी लुसि बेकरले तिरिरी सिठी फुकि हालिन र रेललाई हिडने संकेत गरिन ।
उनले सिठी बजाएर संकेत दिने बितिक्कै रेलले आफ्नो गति लिन थाल्यो । रेल हिडेको केहीबेरमा सय किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा दगुर्न सुरु गरयो । र, एक्कैछिनमा किङ्स सटन उपत्यकालाई पार गरयो । अनि उत्तर बिष्टर स्टेसनमा पुगेर घन्द्रङ् आवाज निकाल्दै रोकियो । उत्तर बिष्टरमा रेल रोकिने बितिक्कै मेरो अगाडि र पछाडि डिब्बामा बसेका हुलका हुल चिनिया यात्रुहरु खाली सुटकेस गुडाउँदै रेलदेखि बाहिर निस्किन थालेको रमाइलो दृश्य देखा परयो ।
एक्कैछाँटका तर त्यति धेरै बिधार्थी यात्रुहरु देखापर्दा मलाई जिन्दगी प्रति थोरै लोभ लागेर आइरहेको थियो । तर, के गर्ने मेरो जिन्दगी लगभग सल्केर सकिन लागेको चुरोटको अन्तिम सर्कोझै थोरै मात्र बाँकी रहेको थियो ।
हुनत यस धर्तीमा भएका हरेक मानिसहरु उनीहरु जस्तो भाग्यमानि के हुन सक्थे होला र ? अझै लिभरपुल, म्यानचेष्टर र बर्मिङ्घाम युनिभर्सिटीमा अध्यान गर्ने अवसर के पाउन सक्थे होला र ? साच्चै अचम्मै भएको छ । केहीबर्षदेखि यता चीनले आर्थिक अवस्थामा अचाक्लि सुधार गरेको छ । त्यसैले बिधार्थीहरुसँग प्रशस्त पैसा भएको हुनाले त्यति टाढादेखि उनीहरु बिष्टर भिलेजमा समान खरिद गर्नको लागि आउने गर्दछन् । बिष्टर भिलेज डिजाइनर दोकानहरुको व्यवस्थापन चाहिँ भ्यालु रिटेल कम्पनीले गर्दछ । तिनै बिष्टर भिलेजमा रहेका विश्र्वका अति प्रख्यात १ सय ६० वटा डिजाइनर दोकानहरुको मालिक चाहिँ अमेरिकन अर्वपति एबम सफल ब्यापारी स्कट डेभिड मालकिन हुन् ।
चीनिया यात्रुहरुलाई त्यँही छाडि राखेर रेलले पुनः गति लिन सुरु गरयो । केहिबेरमा रेल हेडेनहाममा पुगेर दोश्रो चोटी रोकिएको थियो । रेल बाहिरको मौसम घिनलाग्दो थियो किनभने बेस्सरी पानी पर्न सुरु गरेको थियो । बेलायती हिउँदे महिनामा घरिघरि पानी परिरहँदा मेरो मन यस्सै पनि खिन्न भइरहने गर्दथ्यो । त्यति नराम्रो मौसमको बाबजुद मैले झ्याल बाहिर देखिएको हेडेनहाम रेलको सानो कार्यलयलाई मुस्किलले हेर्न सकें । त्यसपछि तिनै कार्यलयभित्र दिनहुँ हुने हर्कतसँग मेरो मन बिरमाईलो तरिकाले चलायमान हुन थाल्यो । किनभने त्यस स्टेसनमा मिसाइल र केरी मध्ये एकजनाले हरेक बिहानको ६ बजेदेखि दिउँसोको १ बजेसम्म र अर्कीले बेलुकी ७ बजेसम्म पालैपालो रेलको टिकट बेचिरहेका हुन्थे ।
उनीहरुले जुन स्थानमा बसेर टिकट बेच्ने गर्दथे । त्यसको सिधै अगाडि १८० डिग्री कोणमा एकजना सुरक्षा अधिकृत उँभिरहेका बिरमाइलो दृश्य त्यहाँ हरदम देख्न सकिन्थ्यो । तिनै दुखि आइरिस सुरक्षा अधिकृतको नाम चाहिँ माइकल ओब्राइन हुन् । उनको अनुहार गोलो तर असाध्यै गोरो थियो । उनको जिउँडाल गाण्टेमूला जस्तै भएतापनि सैनिक जस्तो छोटो केस काटेका थिए । उनले नचाँहिदो तरिकाले एकातिरको कानमा एउटा मुन्द्री झुण्डाइ रहेको हुन्थ्यो र हप्तौ नधोएको सेतो सर्ट अनि कालो पतलुङ पहिरन गरेर कर्तव्य पथमा लम्कि रहन्थ्यो । तर, उनको शारिरिक बनावट जस्तोसुकै बयान गरेतापनि छातिमा टलल टल्किरहने ‘एमुलेट सेक्युरिटी’ लेखेको ब्याजले चाहिँ उनलाई निक्कै शोभायमान दिइरहेको मलाई भान पर्दथ्यो ।
हरेक समयमा दुवै हात पछाडी बाधेर माइकलले टिकट अधिकृतको कार्य कक्षा नियालिरहेको हुन्थ्यो र ‘माइकल’ भन्ने शब्दको प्रतिक्षा गरिरहने गर्दथ्यो । मलाई उनको जिन्दगी देखेर बेलायती कुकुरहरुको जिन्दगी भन्दा झन खराब लाग्ने गर्दथ्यो र एकदम बैराग्य चलेर आउदथ्यो । माइकलले बिगत २ दशकदेखि तिनै मिसाइल र केरीको सेवा गर्दागर्दै उनको बिबाह पनि अशफल भएको थियो । उनको पारपाचुके भइसकेपछि छोरा र छोरी दुवैजनाले आमालाई साथ दिएका थिए । अझै त्यति मात्र कहाँ हुनु र ? उनले जिन्दगीभरि कमाएको श्री सम्पम्ति सबै लगेर उनीहरु डब्लिन बसाइ सरिसकेका थिए ।
त्यसपछिको उँजाड जिन्दगीलाई माइकलले तिनै हेडेनहाम रेल स्टेसनमा हाम फालेर झण्डै नष्ट गर्न खोजेका थिए । तैपनि ती दुवै अङ्ग्रेजी महिलाहरुको म्याराथुन सम्झाइ बुझाइले चित्त बुझाएर अहिले एउटा कोठा भाडामा लिएर देम भन्ने गाउँमा उनी एक्लै बस्ने गरेका थिए । मानिसहरुले अवसर पायो भने कति कठोर, क्रुर, निच, घृणित र अन्यायपुर्ण ब्यवहार गर्दछन् भन्ने कुरो तिनै आइरिस माइकलको जिन्दगीलाई हेरेर मज्जाले चाल पाउन सकिन्थ्यो । मलाई घरिघरि यस्तो लाग्थ्यो, त्यति धेरै त्रास, उकुसमुकुस र छटपट्टीको साथमा बिताइरहेको उनको जिन्दगीले सपनीमा पनि यदाकदा मिसाइललाई देख्दा तर्सिरहेको हुन्छ होला कि ?
रेलले एकचोटी लामो हर्न बजायो र हेडेनहामदेखि बिदा लियो । रेल हिडेको केहीबेरमा प्रिन्सेस् रिसबोरोको क्षितिजसम्म रमाइला फाटहरु देखापर्न सुरु गरे । सान्डरटन स्टेसन नपुगिन्जेलसम्म देखिएको त्यति फराकिला नागिहरुले मेरो ध्यान सर्लक्कै खिची रहेको थियो । अनि तिनै रमाइला नागिहरुमा हेयरफर्ड गाईहरु र सफोल्क भेडाहरु आनन्दित हुँदै मज्जाले चरिरहेको देख्दा मेरो मनै प्रफुल्लित भइरहेको थियो ।
तर, त्यति लोभलाग्दो हरियाली मैदानमा स्व-स्फुर्तको साथ चरिरहेका चौपायहरुको जिन्दगी देखेर सायद उनीहरुको जिन्दगी त माइकलको भन्दा उत्तम छ कि के हो भन्ने मलाई भान परिरहेको थियो । वास्तवमा मानिस र जनावरको जिन्दगीमा के फरक छन् होला ? अनायसै मेरो दिलको कुनादेखि त्यो एउटा प्रश्न खड्केर आयो । यदि ती दुईमा केही कुरोको फरक छन् भने त्यो निश्चय पनि सोच्ने शक्त्ति नै हुनुपर्छ । तैपनि सबैभन्दा चेतनशिल प्राणी मानिस भएको हुनाले उनले गर्ने सोच र विचार पनि पशुपक्षीको भन्दा कमि भयो भनेत के फाइदा हुन्छ होला र ? तिनै प्रश्नले मलाई निक्कै गहिराइमा डुबाइ रहेको थिएँ ।
त्यति रमाइला पाखाभरि देखिएका भेडाहरुसँग मन बहकाउँदै यात्रा गर्दा रेल हाइवेकम स्टेसनमा पुगेर रोकिएको मलाई पत्तै भएको थिएन । तर, अचानक मानिसहरु आ-आफ्नो सिटदेखि उठेको देखेपछि पो झसङ्गै भएको थिएँ । रेल जुन स्थानमा रोकिएको थियो त्यसको ठीक दाहिने तिर अर्को प्लेटफर्म नम्बर २ देखा परिरहेको थियो । तिनै प्लेटफर्मको गेट अगाडि बिरक्त्त लाग्दो अनुहार लिएर एकजना कर्मचारी उँभिरहेका थिए । उनको एउटा हातमा मोबाइल र अर्को हातमा वाकिटाकी रेडियो देखिन्थ्यो । त्यसरी खडा भएर पहरेदार दिइरहेका कर्मचारीको नाम सेवास्चियन कोवाल्स्कि हुन् । उज्वल भविष्यको खोजि गर्दै क्राकोफ, पोल्याण्डदेखि केहीबर्ष अगाडि बसाइ सरेर बेलायत आएका उनी त्यहाँका सहायक टिकट बिक्रेता हुन् ।
सेवास्चियन जहाँ उँभिरहेका थिए उनको नजिकै ४-५ जना अश्वेत मुलका किशोरहरु पनि उँभिरहेका देखिन्थे । यदि त्यहाँको वाताबरणलाई सरसर्ती अध्यान गर्ने हो भने सायद उनीहरु बिना टिकट जबरजस्ति रेलको यात्रा गर्न प्रयास गरिरहेका होला भनेर मज्जाले आकलन लगाउन सकिन्थ्यो । हरेक दिन गजेंडेहरुसँग झगडा गर्नुपर्ने र घरिघरि बेलायती यातायात प्रहरीलाई बोलाइ रहनु पर्ने भएकोले उनी आफ्नो कामदेखि पटक्कै खुसि थिएनन् ।
अझै उनको नजिकै सुन्तला रङ्गको चम्किलो फ्लोरोसेन्ट ज्याकेट पहिरन गरेका अर्को एकजना मानिस पनि देखिन्थे । सेताम्मे दार्ही तर छातिसम्म झरेका ती मानिसले हातमा झाडुको डण्डा समाति रहेका थिए । स्टेसनका कर्मचारीहरुले उनलाई इमरान महमद भनेर चिन्दथे । बिगत १५ बर्षदेखि इमरानले हाइवेकम स्टेसनको प्लेटफर्महरु र सौचालयहरु राजकिय भ्रमणको लागि तयार पारेझै टलक्कै टल्काइ रहने गर्दथे । तर, हाइवेकम सहरको टोले गुण्डा, दुर्व्यासनी, गाँजाखोर र घरबारबिहिन मानिसहरुसँग वाकदिक मानेर सधैको लागि लाहोर नै फिरौ कि कसो भन्ने गुनासो जहिले पनि उनले सुनाइ रहने गर्दथे ।
एकछिनपछि हाइवेकमलाई त्यँही छाडि राखेर रेलले पुनः नयाँ यात्रा सुरु गर्न थाल्यो । केहीबेरमा बेकन्स फिल्ड र अर्को चोटी जेराड क्रस स्टेसनमा पुगेर रेल रोकियो । जेराड क्रसमा रेल रोकिने बितिक्कै मेरो नजर स्टेसनको कार पार्कमा पुगेर झ्याम्मै ठोकियो । त्यस कारपार्कमा लहरै मिलाएर फरारी, लेम्बर्गिनी, बुगाटी, बेन्टली, रोल्स रोयस, मर्सिडिज र पोर्स कारहरु पार्क गरेर राखेको रमाइलो दृश्य देख्न सकिन्थे । त्यति महङ्गा कारहरु चढने घनाढ्य मानवहरु के कति खुसीका साथ बाँचेका होलान भनेर मेरो मन सामुन्द्रिक ज्वारभाटाझै उथलपुथल हुन थालिसकेको थियो ।
त्यसबेलासम्म प्रायः सबैजसो रेलको सिटहरु भरि सकिएको थियो । त्यसैले एकजना भारतिय मूलको जस्ती देखिने युबती सुस्तरी हिडदै म बसेको सिटमा आइन र मसँगै सर्लक्कै टासिएर बसिन । उनी त्यसरी टासिने बितिक्कै मैले एकझलक उनको अनुहारलाई हेरें तर एक्कै शब्द नबोली बसिरहें । मेरा लोभि नयनहरु उनको नजर बाट सुस्तरी फर्काउन पाउँदा नपाउँदै रेल डेनहाम गल्फ कोर्सतर्फ लाग्यो र केहीबेरमा स्टेसनमा पुगेर रोकि हालियो । रेल रोकिने बितिक्कै एकजोडी अङ्ग्रेज युवा गल्फ खेलाडीहरु गल्फको ट्रली तान्दैतान्दै रेलदेखि झरेको दृश्य देखियो ।
अर्को एकजोडी निबृत गल्फर बुढोहरु प्लेटफर्ममा उँभिरहेका देखिन्थे । रेलको ढोका खोल्ने बितिक्कै उनीहरु भित्र पसे । र, सरासर मेरो पिछाडि खाली रहेको सिटमा आएर थपकथपक बसे । उनीहरु रेलभित्र पस्ने बितिक्कै बोगी, पार, बर्डी, ह्यण्डिक्याप र ओभरका कुरोहरु गर्न थालिहाले । जब रेलले गति लिन सुरु गरे तब त्यसदिनको खेल बिग्रनुको मूख्य कारण हावा, हुन्डरी र बर्सात नै हो भनेर एकअर्कालाई माफ दिदै उनीहरुको मुख बन्द भयो । उनीहरु चुपचाप भएको केहीबेरमा अर्को स्टेसनमा रेल पुग्न अगावै पुनः रेल रोकियो ।
उँच्च गतिमा गुडदै गरेको रेल अचानक बिच बाटोमै रोकिएपछि किन रोकियो होला भनेर सबै यात्रृहरु एकअर्कामा हेराहेर गर्न थाले । त्यसरी रेल रोकिएको करिव ५ मिनेट जति भएको थियो । चालकले डेनहाम र पश्चिमी रुइस्लिपको बिचमा एउटा अपृय घटना घटेको हुनाले रेल निक्कै लामो समयसम्म रोकिने जानकारी गरि दिए । रेल रोकिएको १५ मिनेट जति भएपछि चालकले पुनः दोश्रोचोटी उदघोषण गरयो । एकजना युबतीले दगुरी रेहको रेलको अगाडि हाम फालेर देहत्याग गरेको हुनाले अर्को १ घण्टासम्म हामी यँही रोकिने छौं र बेलायती यातायात प्रहरीले छानबिन गरिसकेपछि मात्र हाम्रो यात्रा क्रमशः अगाडि बढनेछ भन्ने जानकारी गराए ।
चालकको कुरो सकिने बितिक्कै म सँग सङ्गै बसेकी युबतीको आँखाबाट सरर आँसु बहन थाल्यो । मैले केहिबेर उनको राताराता नयनहरुलाई मज्जाले पढें । त्यसपछि –
“के तपाईलाई ठीक्छ ?” भनेर सानो प्रश्न गरे ।
“अह ! म पटक्कै ठीक छैन् । किनभने आजपनि म काममा धिलो पुगेभने मलाई नोकरीबाट बर्खास्त गरिने छ । यो मेरो तेश्रो चोटी हो र, म अन्तिम चेतावनीमा पनि छु,” आँखा मिच्दैमिच्दै उनी बोलिन ।
“सुर्ता नगर्नोस ! एउटा ढोका बन्द भयो भने अर्को ढोका खुल्ने छ । तर, मेरो त जिन्दगी नै बन्द हुँदैछ । त्यसकारण अर्को ढोका खुल्नेवाला छैन, तैपनि म खुसी नै छु ।” मैले सानो स्वरमा उनलाई सहानुभती दिने प्रयत्न गरें ।
मेरो कुरो सुनेर उनी एकछिन अमुक बनिन अनि फेरी उनैले मुख खोलिन, “तर, कसरी ?”
“६ महिना अगाडि मलाई आमाशयमा क्यान्सर भयो । त्यसपछि २ महिना जति अस्पतालमा बसे । मेरो लागि चिकित्सकहरुले सबै प्रयत्न गरे । अहिले क्यान्सर फैलिएर ठूलोआन्द्रा र सानोआन्द्रा पुरै जेलिएका छन् । उनीहरुले मलाई अर्को २ हप्तासम्म बाँच्ने अश्वासन दिएका छन् । तैपनि मेरो मृत्यु हुनुभन्दा अगाडिको अन्तिम इच्छा पुरा गर्न मलाई बानबुरीदेखि लण्डनसम्मको रेलयात्रा गर्न आज छुट दिइएको छ । मेरो इच्छा पुरा भएपछि अस्पतालमा गएर १५ दिनसम्म मृत्युलाई पर्खेर बस्नेछु ।”
त्यति भनिसकेपछि म केहीबेर भावुक बनेको थिएँ । मेरो त्यस्तो दुखद कुरो सुनेर पनि उनको आँखादेखि आँसु आउन सकेका थिएनन् किनभने उनको आँसु केहीबेर अगाडि नै रितिसकेको थियो । तैपनि उनैले फेरी प्रश्न गरिन –
“के तपाइलाई मर्नसँग डर लागेन ?”
हुनत मर्न कसैलाई रहर हुदैन । तैपनि पहिले पहिले ज्यादै नै डराएको थिए तर अहिले डर लागेको छैन । किनभने यस धर्तीमा भएका सबै मानिसहरु त्यति धेरै भाग्यमानी कहाँ हुन सक्छन् र ? तैपनि सबैभन्दा अभागी मानिसहरु मध्येको एकजना पात्र म पनि हुँ । किनभने म जन्मने बितिक्कै माओबादीले सुराकीको उपाधी दिएर मेरो बुवालाई जङ्गलमा लगेर हत्या गरेका थिए । बाबुको हत्या भएपछि आमा मर्नसँग असाध्यै डराइन । र, मलाई मध्यरातमा छिमेकीको घरमा छाडी राखेर उनको जीवन बचाउँन गाउँ छाडेर सधैको लागि बिदा भइन । त्यसपछि, म हुर्केर अलिक ठूलो भएपछि अरुको घरमा गोठालो बसेर जीवन यापन गर्न सुरु गरेको थिएँ ।
त्यसपछिको समय आफ्नै गतिमा बहिरहेको थियो । धेरै लामो समयको प्रयत्नपछि मुस्किलले शरणार्थी बनेर ३० बर्षको उमेरमा बेलायत छिरेका थिएँ । बेलायतमा आएर प्रशस्त पैसा आर्जन गर्छु र सुन्दर भविष्यको निर्माण गर्नेछु भन्ने सपना बुनेका थिएँ । तर, मैले जे सोचेको थिएँ, त्यसको ठीक उल्टो भइदियो । यहाँ आएको ५ बर्षसम्म भारतिय रेष्टुँरामा दिनको दुई बोरा प्याज काटदै जीवन गुजारा गरें । तर के गर्ने ? बिधिको नियम कसैले परिवर्तन गर्न नसकिदो रहेछ । ३५ बर्ष लाग्ने बितिक्कै क्यान्सरको बिमारी भएँ । त्यसपछिको बिरमाइलो दिनहरुलाई श्रृष्टीको उपहार सम्झेर हरेक मिनेटसँग मज्जाले मनोरन्जन लिन सुरु गरेको छु । हुनत यस ब्रम्हाण्डमा हुने कुनैपनि चिज स्थायी हुदैन र हामी पनि छैनौं । आखिर बिधिको नियती यस्तै प्रकारले भोग्नु पर्ने रहेछ – जिन्दगी आउछ र जान्छ, त्यँही सोचेर सन्तोष मानिरहेको छु ।
मैले निक्कै लामो समय लिएर बोलें । करिव एकघण्टा समय बितेपछि रेलले पुनः गति लिन सुरु गरयो । मार्लिवन, लण्डनको प्लेटफर्म ३ मा पुगेर रेल अन्तिम चोटि रोकिएको थियो । रेल रोकिने बितिक्कै सबै यात्रृहरु रेलबाट झर्न थाले । ती युबती पनि अरु यात्रृहरुसँगसँगै रेलदेखि झरिन । अबदेखि उप्रान्त उनीसँग मेरो भेट हुन सक्त्तैन भनेर मैले उनको नाम सोध्ने रहर पनि गरेको थिइन । आखिर म मरिहाल्ने रहेछु भन्ने जानकारी पाएपछि मेरो खास्सै परिचय उनले पनि माग्दै मागिनन् ।
सबै यात्रुहरु झरिसकेपछि रेलभित्र म मात्र एकाध बसिरहेको थिएँ । १५ मिनेटपछि सोही रेल फर्केर बानबुरीतर्फ आउँदै थियो । ती युवती रेलदेखि झरेर बाहिर निस्केपछि म बसेको झ्यालबाहिर आएर ठिङ्गै उँभिरहिन । उनी केहिबेर अगाडिसम्म काममा जान धिलो भयो भनेर धुरुधुरु रोइरहेकी थिइन । तर, अहिले समयको ख्याल नगर्दा मेरो मृत्यु अगाडिको यात्रालाई सम्झेर केहि राहत मिलेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई मनमनै लागिरह्यो ।
उनले क्रमशः एक्कै डेक चल्दै नचली १५ मिनेटसम्म त्यहाँ एक्लै उँभिएर मलाई क्वारक्वार्ती हेरिरहेकी थिइन । रेलले बानबुरीतर्फ बाटो लाग्दैगर्दा उनले माथि आकाशतिर हात उँचालेर मलाई सधैको लागि बिदा गरिरहेकी थिइन । मेरो दुवै हातहरु चिउँडोमा मज्जाले आराम गरिरहेको थियो र दुर्भाग्यबश मेरो हृदयले हात उचाल्न मानिरहेको छँदै थिएन ।
-लेखक पूर्व गोर्खा सैनिक बुईपा, खोटाङ्का हाल बेलायतमा बस्छन् ।
निषेधित सहरमा अनायसै रोकिएका मेरा कदमहरु (नियात्रा)
डुम्रिबोटेका जेष्ठ नागरिक न्यानो कपडा सहित समान पाउँदा खुशीले दङ्ग
मेलिना र सुनिताले गाएको ‘निङवा पङ्सिङ्लो’ लिम्बू गित चर्चाको चुलीमा ।।